ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း: 07/06/12
- မြို့မိမြို့ဖ များနဲ့ ညီလေး ညီမလေးတုို့ရေ -
အခုလာမယ့် ဇူလိုင်လ (၁၉) ရက်၊ ၂၀၁၂ မှာ မြန်မာပြည်က ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တကွ
အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီး (၉) ဦး ကျဆုံးခဲ့ကြတာ နှစ်ပေါင်း (၆၅) နှစ် တုိုင်တုိုင်ရှိခဲ့ပြီ။
တုို့ မြန်မာပြည်သားတွေ မမေ့သင့်တဲ့ နေ့ တနေ့ပေါ့။ ညီလေး ညီမလေးတို့တွေအားလုံး
တို့ မမေ့သင့်တဲ့ ဒီအာဇာနည်နေ့ကို အခု နယူးယောက်မြို့မှာ အမှတ်တရ ကျင်းပကြရအောင်။
အားလုံး စုံစုံညီညီ သိုက်သုိုက်ဝန်းဝန်းနဲ့ပေါ့။
ဒီတခါ အာဇာနည်နေ့မှာ ထူးထူးခြားခြားလေးဖြစ်အောင် အားလုံးလည်း မမေ့လျော့သင့်တဲ့
နေ့ထူးတခုအနေနဲ့ ဆုပေးဂုဏ်ပြုပွဲလေး လုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်၊အားလုံး ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီပြိုင်ပွဲလေးကတော့ ညီလေး ညီမလေးတုို့တွေ အားလုံးသိပြီးဖြစ်တဲ့ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေနဲ့
ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာပါပဲ၊ ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပန်းချီကားပဲဆွဲဆွဲ၊
စာစီစာကုံးပဲရေးရေး၊ ကဗျာပဲစပ်စပ်(အင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ဗမာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်)ရပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် ပန်းပုထုတာ၊ ဓာတ်ပုံရိုက်တာ၊ ကာတွန်းဆွဲတာလဲ ရပါတယ်။
အဲဒါတွေမှ မလုပ်ချင်ရင် အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ အတ္ထုပ္ဗတ္တိ ဆောင်းပါးတွေ စုဆောင်းပြီးပြတာ၊
အဲဒီ စုဆောင်းထားတာတွေကိုဖြတ် ညှပ် ကပ်ပြီး ဒီဇိုင်းလုပ်တာ၊ ဒါမှမဟုတ်
ဒီအာဇာနည်နေ့နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့အမြင် ခံစားမှုကို ကိုိုယ်ခံစားရသလိုရေးတာ စတဲ့
အဲဒီလို ကိုယ့် စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖန်တီးထားတာကို
အာဇာနည်နေ့ကျင်းပမယ့် ပွဲရှိရာကို ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက်နေ့မှာ ယူလာခဲ့ဖို့ပါပဲ။
ဒီပွဲကိုလာတဲ့ လူကြီးတွေက စိတ်ကူးအကောင်းဆုံးနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ
အကောင်းဆုံး ဖန်တီးနိုင်သူတွေကို ရွေးချယ်ပြီး ဆုပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဆုတွေကိုတော့ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယနဲ့
နှစ်သိမ့်ဆု (၂) ဆု ဆုိုပြီး ပေးဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
စိတ်ဝင်စားပြီး ပါဝင်ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့။
အာဇာနည်နေ့ လွတ်လပ်စွာ ဖန်တီးမှု ဆုပေးပွဲရဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေကတော့ ......
(က) အသက် (၂၀)အောက် (မည်သူမဆုို) ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
(ခ) ဇူလိုင်လ (၁၅) ရက် နေ့လည် (၁) နာရီ နောက်ဆုံးထားပြီး အခမ်းအနား ကျင်းပရာသို့ယူလာခဲ့ရပါမယ်။
Project Reach, 39 Eldridge Street, 4th Floor, NY, 10002
- (ဂ) ဆုကြေး -
ပထမဆု --------- ၁၂၅ ဒေါ်လာ
ဒုတိယဆု------- ၇၅ ဒေါ်လာ
တတိယဆု------ ၅၀ ဒေါ်လာ
နှစ်သိမ့်ဆု------- ၂၅ ဒေါ်လာ (၂) ဆု
အာဇာနည်နေ့ ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိပ် သိလုိုပါက
U Pyinnyar Zawta: 415 518 7663
Mg Swam yi: 718 606 6370, U Kyaw Win: 646 712 0983
ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသေးစိပ် သိလုိုပါက
art@apt. 347 527 2296
၁၉၆၂ ခုနှစ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးလှရွှေ (ဓာတ်ပုံ – ဗကသများအဖွဲ့ချုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ)
၁၉၃၁ ခုနှစ်ကတည်းက ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ဝန်း အတွင်း တည်ရှိခဲ့သော သမိုင်းဝင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက် အဦးကို ၁၉၆၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေဝင်း ဦးဆောင်သည့် တော်လှန်ရေး ကောင်စီ အစိုးရက မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး ခဲ့သည့်အပြင် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား လှုပ်ရှားမှုကို ပြင်းထန်စွာ ဖြိုခွင်းခဲ့သောကြောင့် ကျောင်းသားများစွာ အသက်ဆုံးခဲ့ရသည်။ ယခုနှစ်သည် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အဆောက်အဦး မိုင်းခွဲဖျက်ဆီး ခံရသည့် နှစ် ၅၀ ပြည့် ဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ထိုစဉ်က ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) ၏ အတွင်းရေးမှူး အဖွဲ့ဝင် တဦးဖြစ်သည့် ၁၉၆၂ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဦးလှရွှေကို ဧရာဝတီ သတင်းထောက် လင်းသန့်က ဆက်သွယ် မေးမြန်းထားသည်။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 3:09 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 2:36 PM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:54 PM No comments:
Thee Lay Thee –
ရုံဝင်ခကိုလည်း လူတန်းစားမရွေး ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် လူတဦးလျင် ကျပ် တထောင် ဖြင့်သာ ကြည့်ရှုနိုင်ရန်စီစဉ်ထားကြောင်း ပွဲကိုကိုယ်တိုင်စီစဉ်သူ လူရွင်တော်ကိုပန်းသီးက မိုးမခကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
မိုးမခအထောက်တော် ဇူလိုင် ၆၊ ၂၀၁၂
(photo – Thee Lay Thee seen at one of local business promotion event)
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:20 PM No comments:
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီက ဦးဥာဏ်ဝင်းကို ဘာကြောင့်
တရားစွဲရတယ်ဆိုတာ နိုင်ငံပိုင် သတင်းစာတွေမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
NLD က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို တင်ပြထားတဲ့ ဆန္ဒမဲတွေ ဖယောင်းသုပ်ထားတယ်ဆိုတာ မမှန် ကန်ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ လုပ်ပြီး သတင်း၊ ဂျာနယ်တွေ မှာ ဖော်ပြပေးဖုိ့နဲ့ ဒီကိစ္စ သတင်းစီစစ်မှု မရှိပဲ ကော်မရှင်ကို အရေးယူပေးဖို့ တင်ပြခဲ့တာကို တောင်းပန်ပြီး တင်ပြစာ ကို ပြန်ရုပ်သိမ်းပေးရန် ညွှန်ကြားစာ ပို့ခဲ့ပေမယ့် ပျက်ကွက်ခဲ့လို့ အခုလို တရားစွဲဆိုတာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
Friday, July 06, 2012 အိမ့်သံစဉ်
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 11:54 AM No comments:
ကိုမြအေးခေါင်းဆောင်တဲ့ ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များဂျယ်ဂေါင်မြို့  မြန်မာလူထု နဲ့ တွေ့ဆုံ
တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်က မြန်မာလူထုကို SKYPE ကနေ တိုက်ရိုက်စကားပြောနေတဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် (Photo: zawmoehetet)
ကိုမြအေးခေါင်းဆောင်တဲ့ ၈၈ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များအဖွဲ့ဒီနေ့ 5.7.2012 နေ့ညမှာ တရုတ်မြန်မာ နယ်စပ် ဂျယ်ဂေါင်မြို့  ဖြိုးမောက်သာ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ တရုတ်နယ်စပ်မှာ လာရောက်အလုပ်လုပ်ကြ တဲ့ မြန်မာလူထု နဲ့ တွေ့ဆုံပွဲလေး လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုလေးတွေလဲ လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကိုမင်းကိုနိုင် နဲ့ ကိုကိုကြီး တို့ကလဲ SKYPE က နေ တဆင့် မြန်မာလူထုကို တိုက်ရိုက် ဆွေးနွေးပေးခဲ့ ပါတယ်။ မြန်မာလုပ်ငန်းရှင်များနှင့်ရွေ့ပြောင်းလုပ်သားအပါဝင်လူတစ်ရာကျော်လောက်တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ် ။
ဒီပွဲလေးကို လူထုကကျေနပ်သလို ကိုမြအေးတို့အဖွဲ့မှလဲ အားရကျေနပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။လူထုနဲ့ အပြန်အလှန် ဆွေးနွေး မှုလေးက ပွဲလေးကို ပိုပြီးကျေနပ်မိတယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
တရုတ်ပြည်ဂျယ်ဂေါင်မှာ ကိုမြအေးနဲ့ 88 ကျောင်းသားများကိုလာရောက်တွေ့ဆုံသော မြန်မာလူထု. . .
လူထုနဲ့ တွေ့ဆုံနေတဲ့ ကိုမြအေးနဲ့ 88ကျောင်းသားအဖွဲ့. .
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 10:21 AM No comments:
7 ဂျူလိုင်မှာ ကျဆုံးသွားသော ကျောင်းသားများကိုတတ်စွမ်းတဲ့အနုပညာနှင့် ဂါရ၀ပြုပါတယ် NAY ZAW(TH-Z)
“ကျောင်းနံရံနဲ့ဒေါင်းအလံ”ဒေါင်းငှက်မင်း လှောင်ကာချ အတောင်ပံက အမြင့်မပျံနိုင်လဲ ...တွန်ကျူးသံ မြန်မာပြည်မက ကဘာမြေအထိ ကြားယောင်နိူင်တယ်...ဒေါင်းငှက်တွေံပြန်ကာကြွ ညီညာမှ အချုပ်အနှောင်ခံဆဲ ဒေါင်းငှက်မင်းပျံနိူင်မှ မြန်မာပြည်သူက မင်းကိုနိုင်မယ်..
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:54 AM No comments:
မပြန်လမ်း ငရဲခန်းသာ မြန်းရမှာကို
တက္ကသိုလ်ဘုန်းကြွယ် (ဇူလိုင် ၅ ၂၀၁၂)
by Victor Tan on Friday, July 6, 2012 at 7:33am ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 9:34 AM No comments:
ဇူလိုင် ၇ ရက် ကျောင်းသားအရေးတော်ပုံကို သက်ဆိုင်ရာက အကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းခဲ့တာဟာ အင်မတန်ဝမ်းနည်းဖွယ်ရာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့ သမဂ္ဂအဆောက်အဦးကို ကျောင်းသားတွေ ပြန်လည် တည်ဆောက်ခွင့်ရသင့်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က
ဒါ့အပြင်သူက ပြီးခဲ့တဲ့ဥရောပ ခရီးစဉ်အတွင်း သက်ဆိုင်ရာအစိုးရ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံရာမှာ မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ကူညီနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကို အကျိုးရှိစွာ ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း စသဖြင့် RFA ကိုထုတ်ဖေါ် ပြောဆို လိုက်ပါတယ်။
အပြည့်အစုံကို ဦးခင်မောင်စိုးတင်ဆက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီခရီးကြမ်းနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အစီအစဉ်မှာနားဆင်ပါ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:50 AM No comments:
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရအပါအ၀င် နောင်အစိုးရအဆက်ဆက် ရင်ဆိုင်ရမည့် ဆိုးမွေများကို သုံးသပ်ခြင်း။
အခု ဖော်ပြသော အချက်များသည် ယခုဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်လက်ထက်မှ စတင်ကာ နောင် တက်လာမည့်အစိုရတိုင်းအတွက် အမြစ်တွယ် ဖြိုဖျက်ရခက်သည့် ကင်ဆာကဲ့သိုသော ပျက်စီးမှုဟု တင်စားနိုင်ပါသည်။ အကျင့်ပျက်ချစားခြင်း၊ Rule Of Law မရှိခြင်း အစရှိသည်ကို အခြေခံထားသော ယိုယွင်းမှုများသည် ယခု ဦးသိန်းစိန် အစိုးရလက်ထက် မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့် အနည်းငယ်ပေးထားချိန်တွင် မတိုင်ပင်ထားပါပဲ တစ်ပြိုင်တည်း ထွက်ပေါ်လာနေသည်မှာ မျက်မြင်ပင်ဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ခေါင်းငုံခံနေကြရသူများ ခေါင်းမော့လာကြသလို ဝေဖန်ထောက်ပြသူ ပညာရှင်များ မီဒီယာများ ပေါ်ထွက်လာသည်။ ထို့ကြောင့် ယခင် စစ်အစိုးရ၏ အဖက်ဖက်မှ စွန့်ပစ်ခဲ့သော ချေးထုပ်ကြီးအား ယခု အစိုးရသစ်မှ ခေါင်းပေါ်ရွက်ကာ လိုက်ဖြေရှင်းနေရသည့်ဘ၀ရောက်နေသည်ကိုလည်း စာနာမိပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုကိစ္စများထဲမှ မိမိ လက်လှမ်းမီရာများကို လေ့လာဖော်ပြလိုက်ပါသည်..။
(၁) ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၀ အတွင်းမှ .. ၂၀၁၂ အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော လယ်သမားများနှင့် ပြည်သူများ အိုးအိမ်ရုံး အစရှိသည်တို့တွင် ဆန္ဒပြပွဲများ ဖြစ်ပွားခြင်း။
အဖြေ = ယခင်စစ် အစိုးရလက်ထက် ၁၉၈၉ မှစခဲ့သောဖြစ်စဉ်များဖြစ်ပြီး.. အစိုးရနှင့် ပလဲပနံသင့်သော ကုမဏီများ၏ ငွေမတန်တဆပေးချေကာ ..လယ်မြေ/မြေယာသိမ်းယူမှုများပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းကို မကျေနပ်ကြသဖြင့် ယခု အစိုးရသစ်လက်ထက် ကြမှ ဆန္ဒပြကြခြင်း။ ဆန္ဒပြရဲသောဖြစ်စဉ်များ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေခြင်း။ (ယခုဆန္ဒပြမှုများမှာ ၁၉၈၉ မှ ၂၀၁၀) အတွင်း မြေယာသိမ်းယူမှုများကို ဆန္ဒပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(၂) ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၀ အတွင်းမှ ၂၀၁၂ အတွင်း ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော
စက်မှု့ဇုံ အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြပွဲများ..
အဖြေ = ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၈၉ မှ စခဲ့သော အလုပ်သမားဥပဒေများ/အလုပ်သမားအကျိုးခဲစားခွင့်များ (အခြေခံလစာဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များ) အားနည်းခြင်း ကြောင့် အလုပ်ရှင်များ နှိပ်ကွပ်သမျှ နှစ် (၂၀) ခန့် နင်းပြား ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း။
(ယခင်က ဆန္ဒပြလျှင် ... ယခုလောက် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ မဆောင်ရွက်ပဲ မသိချင်ယောင်ဆောင်ထားခြင်းက အားလုံးအသိပင်။
(၃) ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၂ အတွင်း မော်တော်ယာဉ် လိုင်များအားလုံးနီးပါးမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော ယာဉ်စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုများ။ ယာဉ်မတော်တဆမှုများ.. အုပ်စုဖွဲ့အနိုင်ကျင့်မှုမှုများ သိသာထင်ရှားလာခြင်း။
အဖြေ။ == ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် မထသ နှင့် အပါအ၀င် အခြားယာဉ်လိုင်းစုံတို့အား စစ်မှုထမ်းဟောင်များနှင့် စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်တို့မှာ အင်အားသုံးချယ်လှယ်နေကြသဖြင့် လုပ်ချင်တာလုပ်နေကြခြင်။ ယာဉ်ထိန်းရဲများအားလည်း လေးစားကြောက်ရွှံခြင်းမရှိတော့ဘဲ ငွေပေးရင်ရတယ်ဟုသောသဘောဖြင့် ပိုက်ဆံလိုချင်သော သူတောင်းစားသာသာ ဆက်ဆံခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ထုံးစံလိုဖြစ်နေခြင်း။
(မထသ ၃၅ လိုင်းဆိုလျှင် ယာဉ်ထိန်းရဲအား တိုက်သတ်မှုမှာ တစ်ခုထက်ပိုပါသည်။)
(၄) ဦးသိန်းစိန်အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၂ အတွင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကြီးများ ကန့်ကွက်ခံရခြင်းင့် ရပ်တန့်ခံရခြင်း။
အဖြေ === ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းများကို ကော်မရှင်ရလျှင်ပြီးရော/ဒေါ်လာရလျှင်ပြီးရော စိတ်ထားဖြင့်.. MOU ထိုးကာ ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်း။ လက်မှတ်ထိုးသူ တာဝန်ရှိသူဝန်ကြီးများမှမှ MOU တွင် ဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတာတောင် သေသေချာချာ မဖတ်ပဲ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြခြင်း။ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာနှင့် ပြည်သူလူထုကို အကျိုးပြုခြင်းဆိုင်ရာ EIA, SIA များကို လျစ်လျူရှုကာ..ထင်သလိုပြုမူခဲ့ခြင်း။
(၅) အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၀-၂၀၁၂ တွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော နယ်မြေတွင်း တရားမ၀င်/တရားဝင် နည်းများဖြင့် စိမ့်ဝင်ပျံ့နှံ့လာသော ဘင်္ဂလီများကြောင့် အရေးအခင်းများဖြစ်ပွားခြင်း။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ သေကြေပျက်စီးခြင်း
အဖြေ === ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် နိုင်ငံတ၀ှမ်း မကြုံစဖူး အဂတိလိုက်စားမှုကြီးများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး နယ်စပ်ဒေသ (ဘင်္ဂလား) မှ ဘင်္ဂလီများ ငွေပေးလျှင် အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်လာခဲ့ခြင်း။ ထိုမှတစ်ဆင့် ပိုမိုများပြားလာခြင်း။ လ၀ကဥပဒေ ခိုင်မာသောလည်း White card ကို လူဦးရေ ငါးသိန်းနီးပါးကို ထုတ်ပေးထားခြင်းအပြင် လက်ရှိ တရားမ၀င် လူဦးရေ ငါးသိန်းနီးပါး (အဂတိလိုက်စားမှုများအရ) ရခိုင်ပြည်တွင်းတွင် ရောက်ရှိနေခြင်း။ ထို့အပြင် ၁၉၈၉ နောက်ပိုင်းမှဝင်ရောက်လာသော ဘင်္ဂလီများက ရန်ကုန်တွင် အခြေချကာ နိုင်ငံတော်သူဌေးများအဆင့်အဖြစ်ရောက်ရှိနေခြင်။ ထိုသူဌေးများထဲမှ ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမတ်များအဖြစ်ရောက်ရှိနေကာ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီး စိစစ်ရေးကတ် ပန်းရောင် ထုတ်ပေးရန်တောင်းဆိုသည်အထိ ဆိုးဝါးလားခြင်း။
(၆) ဦးသိန်းစိန် အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် .ရွှေတူးနှင့် သတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်သော ကုမဏီ ရာပေါင်းများစွာမှ အစိုးရသစ်သို့ အခွန်ဆောင်ရန် ပျက်ကွက်ခြင်းနှင့် အလုပ်သမားများ ဆန္ဒပြခြင်း။ ပညာရှင်းများ/စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များ ဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆာင်ရွက်ခြင်းမရှိသဖြင့် မြစ်ချောင်းများ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းခြင်း
အဖြေ === ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက် မျက်နှာကြီးသူများ၊ သြဇာရှိသူများနှင့် (တရုတ်) သြဇာခံကုမဏီများအား ရွှေတူးဖော်ခွင့်ပြုခြင်းအပြင် ဒေသအာဏာပိုင်များ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်ရန်မလွယ်သော အခြားလုပ်ပိုင်ခွင့်များကို ပေးထားခြင်း။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေများ ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိခြင်း။
(၇) အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၀-၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် အစိုးရ၏ လယ်လုပ်သူများ လယ်ပိုင်ရေးနှင့် လယ်သမားများ လယ်ပိုင်ရေးမျှော်လင့်ချက်များအား ကြိုးစားသမျှ အရာမထင်ခြင်။
ဖြေ = စစ်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၀၀ ၀န်းကျင်ခန့်မှစတင်ပြီး (ဦးရွှေမန်း၏သားပိုင်ဆိုင်သော) ဧရာရွေှ့ဝါ၊ ၀ါဝါ၀င်း အစရှိသော ကုမဏီကြီးများက လယ်သမားကို စပါးပေး (စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ) ထုတ်ခြင်းပြီး လယ်များကို အပိုင်ရယူရန်(ချစ်တီး) များကဲ့သို့ ကြိုးစားခဲ့ခြင်း။ ၂၀၀၈ နာဂစ်အပြီးတွင်လယ် (ဦးတေဇပိုင်) ထူး .. စသော ကုမဏီများမှ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအကြောင်းပြကာ လယ်ယာလုပ်ငန်းများတွင် ၀င်ရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံလာကြခြင်း။ ယနေ့အချိန် ၂၀၁၂ တွင် လယ်လုပ်သူလယ်သမားးများထက် ကုမဏီပိုင်လယ်များ များပြားနေသလို လယ်သမားအများစုမှာ သူရင်းငှား အဖြစ် ကုမဏီလယ်များတွင် ပြန်လည်လုပ်ကိုင်နေရခြင်း။
(၈) အစိုးရသစ်လက်ထက် ၂၀၁၀-၂၀၁၂ တွင် နိုင်ငံအတွင်း အင်အားအကြီုံးဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစုကြီများ အခွန်ဆောင်မှု နည်းပါးခြင်း
အဖြေ = စစ်အစိုးရလက်ထက် (၁၉၈၈-၂၀၁၀) မှ အစပြုကာ အစိုးရထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များနှင့် ပလဲပနံသင့်နေသော ကုမဏီများ၊ တပ်မတော်ပိုင် စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်နှင့် စစ်ထောက်ချုပ်ဦးဆောင်သော မြန်မာနိုင်ငံစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း (MEC) အစရှိသည်တို့မှ အခွန်ဆောင်မှု နည်းပါးခြင်းမှစတင်ကာ ယနေ့အချိန်အထိ အခွန်ရှောင်နေကြခြင်း။
(၉) အစိုးရသစ်လက်ထက် နိုင်ငံတကာမှ စီးပွားရေးကန့်သန့်မှုများ ပျက်ပြယ်ကာ စီးပွားရေးပိတ်ဆိုမှုကို လျှော့ချလိုက်သော်လည်း နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ မ၀င်သေးခြင်း။
အဖြေ == စစ်အစိုးရလက်ထက် (၁၉၈၈-၂၀၁၀) မှ စတင်ကာ ယနေ့အထိ ပြဌာန်းထားသော နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေများ/အလုပ်သမားဥပဒေများ ခိုင်မာမှုမရှိခြင်း။ နှစ်ပေါင်းများစွာ ..အမိန့်ကြော်ငြာစာများဖြင့်သာ စီမံခန့်ခွဲခဲ့ခြင်း ..။ ယခု အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ၂၀၁၂ တွင် မခိုင်မာ၊ ခေတ်မမီတော့သော ဥပဒေများကို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြဌာန်းနေရခြင်း။
(၁၀) အစိုးရသစ်လက်ထက် Myanmar အစား Burma ဟုသော အသုံးအနှုန်းကို ကန့်ကွက်ရန်ကြိုးစားခြင်။။ လူငယ်များ တိုင်းရင်းသားများမှ Myanmar - Burma ဟုသော အသုံးအနှုန်းများအား ၀ိဝါဒ သဘောထား ကွဲလွဲစပြုလာခြင်း။
အဖြေ ==== ယခင်စစ်အစိုးရလက်ထက် ၁၉၈၉ တွင် အင်္ဂလိပ်အသုံအနှုန်းများအား မြန်မာအသံထွက်ဖြင့် စာလုံးပေါင်းရန် သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် Burma ကို Myanmar ဟုသော စကားရပ်ဖြင့် ပြဌာန်းချက်ထုတ်ကာ အာဏာတည်စေခဲ့ခြင်း။
(၁၁) အစိုးရသစ်လက်ထက်တွင် မော်တော်ယာဉ်များအား တင်သွင်းမှု ပေါ်လစီနှင့် အခွန်များ လျှော့ချကာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ခြင်းကြောင့် မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ဆိုင်သူများ နစ်နာခဲ့ခြင်း။ စီးပွားရေးထိခိုက်လာခြင်း။
အဖြေ === ယခင်အစိုးရလက်ထက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကားတင်သွင်းမှုကို ကန့်သတ်ကာ ဦးပိုင်ကဲ့သို လုပ်ငန်းရှင်များကိုသာ သီးသန့်ဖွင့်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ အတွင်း ကားတစ်စီး၏ပေါက်ဈေးမှာ အဆ ၁၀၀ နီးပါးခန့်တက်သွားခဲ့သဖြင့် ယခုလို ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများစွာလုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ထိုအချိန်က ကားဈေးမြှင့်ကာဝယ်ယူထားသူများမှာ များစွာနစ်နာခဲ့ခြင်း။
အဲဒီကိစ္စများဟာ .. ၂၀၁၅ အတွင်းမှာ အားလုံး အဆင်ပြေသွားနိုင်ဖို့ မလွယ်ပါ။ အမြစ်ကအစနှုတ်ယူဖို့ ဆယ်စုနှစ်များစွာ အချိန်ယူရမှာပါ။
အစရှိတဲ့ အထုပ်အရှုပ်တွေကို လေ့လာရင်းနဲ့ပဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၄၄၅) ကို ပြန်လည်မြင်ယောင်မိပါတော့တယ်.။
“ ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်သည် နိုင်ငံတော်
ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေး အဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီတို့၏ မူဝါဒ
လမ်းညွှန်မှုများ၊ ဥပဒေများ၊ နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန့်ပြန်တမ်းများ၊ ကြေငြာချက်များကို လည်း
ကောင်း နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံ
ကောင်စီတို့၏ ဆောင်ရွက်ချက်များ၊ တာဝန်များနှင့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်းကောင်း ဆက်ခံသည်။ ယင်းအဖွဲ့
သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်တဦးဦး၊ သို့မဟုတ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တဦးဦး၏ တာဝန်အရ ဆောင်ရွက်ချက်များ အပေါ်
အကြောင်းပြုလျက် ယင်းတို့အား တရားစွဲဆိုခြင်း၊ အရေးယူခြင်းမရှိစေရ။”
သမ္မတကြီးကတော့ ပြောပါတယ်..။ နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်ကြေး..တဲ့... သူပြောတာကို.. သဘောပေါက်သလိုလိုတော့ ရှိသား။။။
။မည်သူမဆို Share နိုင်ပါသည်။
by Yan Aung on Friday, July 6, 2012 at 2:35am ·
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 8:42 AM No comments:
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 1:09 AM No comments:
(၁၃၇၄ ၊ပထမ ၀ါဆိုလပြည့်ကျော်(၂)ရက်)
(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၅)ရက်)
၁၉၆၂ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၇)ရက်နေ့ဟာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆန့်ကျင်အံတုခဲ့တဲ့ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ ရဲ့ အသက်သွေးပေါင်းများစွာ ပေးဆပ်ခဲ့ရတဲ့ နှစ်(၅၀) ပြည့်တဲ့နေ့ ဖြစ်တယ်။ ဇူလိုင်လ(၇)ရက်နေ့မှာ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကွန်ယက်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ၀ိဇ္ဇာ၊သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကွန်ယက်မှ ၀မ်းနည်းခြင်း အထိမ်း အမှတ်အဖြစ် အနက်ရောင် အ၀တ်များ ၀တ်ဆင်၍ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများကို ဖေါ်ဆောင်ခြင်း၊ အထက်ဗမာပြည် နှင့် အောက်ဗမာပြည်ရှိ ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ်တို့က နှစ်(၅၀) ပြည့်7- JULY အောက် မေ့ဖွယ် အခမ်းအနားများ ကျင်းပခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ နှစ်(၅၀) ပြည့် ရွှေရတု7- JULY အ ခမ်းအနားများကို နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည့် ကိစ္စရပ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင် အဖွဲ့အ စည်းများမှ တာဝန်ရှိသူများက ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် (အထက်ဗမာပြည်) လုပ်ငန်း ကော်မတီနှင့် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျောင်းသား သမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလုပ်ငန်းကော်မတီမှ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ အပါအ၀င် ဗမာတစ်ပြည်လုံးရှိ ခရိုင်အသီးသီးမှ ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များကို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ခြိမ်းခြောက်၊ တားမြစ်၊ ပိတ်ပင်ခြင်း များ ပြုလုပ်လျက် ရှိနေပါသည်။ ယင်းကဲ့သို့ အာဏာပိုင်များမှ ပြုမူ ဆက်ဆံပုံများသည် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကို ကျင့်သုံး အ ကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နေသည့် လမ်းကြောင်းမှ သွေဖယ်နေသလို မြန်မာ့နည်း မြန်မာ့ဟန် ဒီမိုကရေစီစနစ် နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကွန်ယက်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ ကွန်ယက် နှစ်ခုမှ မေးခွန်းများ ထုတ်ရတော့မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ယခု ကြုံတွေ့နေရသည့် ဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြင်းထန်စွာ ရှုံ့ချလိုက်ပြီး ခြိမ်းခြောက် ဟန့်တား နှောင့်ယှက်မှုများကို သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ ချက်ချင်း လက်ငင်း ရပ်တန့်ပေးရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကွန်ယက်နှစ်ခုမှ သဘောထား ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။
ပိတ်လို့ ရရင် ပိတ်စမ်းပါ မင်းတို့ တားဆီးနိုင်တားထားလိုက်..စည်းမကျော်စေနဲ့ ...
“ချိန်ခြောက် လို့ နောက်တွန့်တက်ရင် ခွတ်ဒေါင်းဘယ်မည်လိမ့်မလဲ”
ငါတို့ ကြေငြာချက် က သေမင်းတမာန် လား .. ကျောက်စာလား သိဖို့ အချိန်ကပေတံမဟုတ်ဘူး...ငါတို့ ကြေငြာချက် က မင်းတို့ အတွက် ငရဲပြည် ဘဲ...ကျောင်းသားသမိုင်း မှာ ဘယ်တော့မှမရိုင်းစေရဘူး..မှတ်...။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:46 AM 1 comment:
တိုင်းရင်းသားတန်းတူရေး လွှတ်တော်က ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပေးသင့်ဟု သမ္မတပြော
ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ သမ္မတ နှစ်ဦး ဦးဆောင်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ၏ ပထမဆုံး အစည်းအဝေးတွင် တိုင်းရင်းသားတို့ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိရန် လွှတ်တော်မှ ဥပဒေ
ပြဋ္ဌာန်းဆောင်ရွက်ပေးသင့်ကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ မှာကြားသည်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး အင်တာနက် စာမျက်နှာတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
နေပြည်တော် သမ္မတ အိမ်တော်တွင် ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က ပြုလုပ်သည့် ပြည်ထောင်စု
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီ
နှစ်လပြည့် သည့်နေ့ ပထမဆုံးစည်းဝေးမှုတွင် တိုင်းရင်းသားများ အခွင့်အရေး အတွက် ဥပဒေ တရပ် ပြဋ္ဌာန်းမှသာ ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ပိုမိုအောင်မြင်မည် ဟုလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ပြောသွားသည်။
"တိုင်းရင်းသားများအတွက် အသက်တမျှ အရေးကြီးတဲ့ ဥပဒေတရပ်ပြဋ္ဌာန်းထားသော တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးများနဲ့ အခြား
သော တိုင်းရင်းသားများ အခွင့်အရေးများကို လွှတ်တော်မှ လေ့လာသုံးသပ်ပြီး ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းပေးမယ်ဆိုရင် မိမိတို့ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ပြည်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေး ဗဟိုကော်မတီရဲ့ လုပ်ငန်းများ အလျင်အမြန် အောင်မြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။" ဟု သမ္မတက ပြောသွား သည်။
သမ္မတက "ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံကို တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပိုင်ဆိုင်ကြသည့်အတွက် တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံမှုနဲ့ တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးရသင့်သူများ ဖြစ်ကြပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့ တူညီတဲ့ အဓိကဆန္ဒဟာ ပြည်ထောင်စု အတွင်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုအားလုံး တန်းတူရည်တူ ဆက်ဆံမှုနဲ့ တန်းတူရည်တူ ညီမျှစွာ အခွင့်အရေး ရရှိရေးပင်
ဖြစ်ပါတယ်။" ဟုလည်း ပြောသွားသည်။
ယင်းအပြင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ အပိုဒ် ၃၆၅ တွင်ပါရှိသည့် "နိုင်ငံသားတိုင်းသည် ဥပဒေနှင့်အညီ မိမိတို့အမြတ်တနိုး ထားရှိသော စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု အနုပညာနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းတို့ကို လွတ်လပ်စွာ ပြုစုပျိုးထောင် ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်။" ဟူသည့် အပိုဒ်ကို ကိုးကားထည့်သွင်း ပြောကြားသွားသည်။
ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်မှု မထိခိုက်အောင် လွှတ်တော်မှ ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းပေးပါက တိုင်းရင်းသား တို့၏ လိုအင်ဆန္ဒ ပြည့်ဝမည်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား ပြန်လည်ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခများ
စစ်အစိုးရထံမှ ၂၀၁၁ ခုနှစ် မတ်လအတွင် အာဏာလွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က
ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ "စနစ်ဟောင်းမှ စနစ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းရာမှာ ပြည်သူတွေဟာ စာရွက်ပေါ် တွင်သာ ကူးပြောင်းခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ကျတဲ့ အပြောင်းအလဲကို လိုလားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ " ဟုလည်း သမ္မတက ဖြည့်စွက်ပြောကြားသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် မေလ ၃ ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ဗဟိုကော်မတီတွင် ဒုသမ္မတ ရာထူးမှ အနားယူသွားပြီ ဖြစ်သည့် သူရသီဟ ဦးတင်အောင်မြင့်ဦး၊ ဒုတိယသမ္မတ ဒေါက်တာ စိုင်းမောက်ခမ်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်း၊ အမျိုးသား လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်အောင်မြင့်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ဖြစ်ကြသည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှမင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဋ္ဌေးနှင့် ပြည်ထောင်စု ရှေ့နေချုပ် ဒေါက်တာ ထွန်းရှင်တို့က အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသည်။
မျိုး သန့် 
မနှစ်ကရေးထားတဲ့7July အမှတ်တရကဗျာလေးပါ။ တိုင်းတပါးနယ်ချဲ့လက်အောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့၊ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်ကလွတ်မြောက်ဖို့၊ တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက် အသက်ပေး စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံသွားခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းသားအပေါင်းတို့ရဲ့ အရိုးတွေဟာ ဟိုးအောက်ဆုံးအလွှာကနေ ရှိနေကြမှာပါ။
Posted by ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင် ဖေါင်ဒေးရှင်း at 12:13 AM No comments: